ဂန္ထဝင်စတိုင်၊ နူးညံ့။ ကြာရှည်ခံသောအီသီယိုးပီးယားသားရေဖြင့်ပြုလုပ်ထားပြီးငွေသားနံရံဖြင့်ဖုံးအုပ်ထားသည်။ နောက်ကျောမှာချုပ်ရိုးနှစ်ချောင်းပါရှိသည်။ ၎င်းသည်ရိုးရှင်းပြီးအရသာရှိပါသည်။
ပျော့ပျောင်း။ ကြာရှည်ခံသောအီသီယိုးပီးယားသားရေဖြင့်ပြုလုပ်ထားသောလူနေမှုပုံစံ၊ ပိုးနံရံနှင့်ပိုးကြိုးပါသောနောက်ကျောသည်သဘာဝတွင်နေထိုင်သည်နှင့်တူသည်။ ပိုးနံရံသည်သင်၏လက်များကိုကောင်းမွန်စွာခံစားနိုင်စေသည်။
Cognac cuff နှင့်အတူအနက်ရောင်သိုးသားရေလက်အိတ်များ
Paihuang သိုးသားရေဖြင့်ပြုလုပ်ထားသောဇိမ်ခံကားနှင့်အဆင့်မြင့်လက်အိတ်၊ သားရေဖြင့်ချောချောမွေ့မွေ့ချောမွေ့သော၊ သားရေအချောချောမွေ့မွေ့၊ နောက်ဆုံးပေါ်ဖက်ရှင်များနှင့်အကောင်းဆုံးလက်မှုလက်ရာတို့ဖြစ်သည်။ ပြီးပြည့်စုံသောပေါင်းစပ်! fanshion paty များအတွက်အကောင်းဆုံးဝတ်ဆင်!
Paihuang သိုးသားရေဖြင့်ပြုလုပ်ထားသောဇိမ်ခံကားနှင့်အဆင့်မြင့်လက်အိတ်၊ သားရေဖြင့်ချောချောမွေ့မွေ့ချောမွေ့သော၊ သားရေအချောချောမွေ့မွေ့၊ နောက်ဆုံးပေါ်ဖက်ရှင်များနှင့်အကောင်းဆုံးလက်မှုလက်ရာတို့ဖြစ်သည်။ ပြီးပြည့်စုံသောပေါင်းစပ်! Cognac cuff နှင့်နောက်ဖက်တွင်အမှတ် ၃ ခုပါ ၀ င်ပြီး ပို၍ ထူးခြားသည်နှင့်မျက်စိကြည့်နိုင်သည်။ ၎င်းသည် fanshion paty အတွက်အကောင်းဆုံးဝတ်ဆင်မှုဖြစ်သည်။
လက်အိတ်မောင်းသောအမျိုးသမီးများ။ ပျော့ပျောင်း။ ဆန့်နိုင်သောသားရေဖြင့်ပြုလုပ်ထားသောလက်အိတ်များသည်စတိုင်လက်ပေါက်များ၊ Viscose ကွင်းဆက်ပိတ်ထားသောလက်ပတ်နာရီများနှင့်သွင်ပြင်ရှိသည်။ အသုံးပြုရန်အဆင်ပြေသည်။ Perforated သားရေနှင့်လေဝင်လေထွက်ကောင်းသောနောက်ကျောသည်သင်၏လက်များအတွက်အမြင့်ဆုံးသက်ရောက်နိုင်စွမ်းနှင့်ပြောင်းလွယ်ပြင်လွယ်ကိုပေးသည်။
နူးညံ့။ ကြာရှည်ခံသောသိုးမွေးဖြင့်ပြုလုပ်ထားသည် loose ချောသောသင့်လျော်သောအသုံးအဆောင်များနှင့်အလွန်အမင်းသက်တောင့်သက်သာရှိပြီးလက်အားကောင်းမွန်စေသည်။ အလုပ်အတွက်, ညနေပိုင်းထွက်, ဒါမှမဟုတ်နေ့စဉ်ဝတ်ဆင်ရန်!
Ladies သိုးသားရေ handsewn နှင့်အတူကားမောင်းလက်အိတ်
အလုပ်အတွက်၊ ညနေခင်းတွင်သို့မဟုတ်နေ့စဉ် ၀ တ်ဆင်မှုများအတွက်ဤလက်အိတ်သည်နူးညံ့။ ကြာရှည်ခံသည့်သိုးမွေးဖြင့်ပြုလုပ်ထားသည်။ loose ချည်တပ်ဆင်ခြင်းနှင့်အလွယ်တကူအသုံးပြုနိုင်ခြင်း၊ မှတ်သားထားသောလက်ကောက်ဝတ်၊ လက်နှစ်ချောင်းစီ။ လှပပြီးနူးညံ့သောကြည့်ရှုပါ။ ဒီလက်အိတ်ဟာနှစ်တွေတစ်လျှောက်လှပစွာဝတ်ဆင်ပြီးရာသီအလိုက်သင့်ကိုဆက်ပြီးအစေခံပါလိမ့်မယ်။
ပျော့ပျောင်း။ ကြာရှည်ခံသောအီသီယိုးပီးယားသားရေဖြင့်ပြုလုပ်ထားသည့်ပေါ့ပါးပြီးကြာရှည်ခံသောသိုးသားရေ၊ ပိုးကြိုးနှင့်အတူနောက်ကျောကိုချုပ်ရိုးသုံးချောင်းဖြင့်ဖုံးအုပ်ထားသည်။ ၎င်းသည်ရိုးရိုးလေးအရသာနှင့်တူသည်။
ပျော့ပျောင်း။ ကြာရှည်ခံသောအီသီယိုးပီးယားသားရေဖြင့်ပြုလုပ်ထားသည့်ပေါ့ပေါ့ပါးပါးစတိုင်ကျည်၊ ပိုးကြိုးနှင့်အတူနောက်ကျောသားရေကြိုးနှင့်အတူဖုံးထားသောကျောပိုးအိတ်သည်သင့်လက်များအတွက်ပိုမိုသင့်တော်ပြီးသက်တောင့်သက်သာဖြစ်စေပါ။
ပျော့ပျောင်း။ ကြာရှည်ခံသောအီသီယိုးပီးယားသားရေဖြင့်ပြုလုပ်ထားသည့်ငွေသားဖြင့်ပြုလုပ်ထားသည့်နံရံဖြင့်ပြုလုပ်ထားပြီးကျောဘက်တွင်ဇစ်ပါရှိသည်။ Willow leafher နှစ်ပိုင်း၊ အလွန်စမတ်ကျပြီးချစ်စရာကောင်းသော။ ကျပန်းဝတ်စုံမှဝတ်စားဆင်ယင်မှုများစွာအတွက်ကောင်းမွန်သောခံစားမှုရှိစေပါ။
ဂန္ထဝင်စတိုင်၊ ပျော့ပျောင်း။ ကြာရှည်ခံသောအီသီယိုးပီးယားသားရေဖြင့်ပြုလုပ်ထားသည့်ငွေသားနံရံဖြင့်ပြုလုပ်ထားသည်။ နောက်ကျောကလှိုင်းတံပိုးများဖြင့်ဖုံးအုပ်ထားသည်။ ၎င်းသည်ရိုးရိုးအရသာနှင့်တူသည်။